मृगौला पीडित अर्जुनको आर्थीक अवस्था समेत नाजुक – खुल्लापाना
५ चैत, मेलम्ची ।
सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाँउपालिका—६ का अर्जुन बोम्जन भर्खरै २६ वर्षका भए । वीर बहादुर बोम्जनका छोरा अर्जुनमा गत जेठ महिनादेखि गोडा सुन्नीने, थोरै बाटो हिड्दा समेत स्वाँ—स्वाँ हुने लगाएतको स्वास्थ्य समस्या देखिदैं आएको थियो ।
शुरुमा गाँउघरको घरेलु उपचार तथा धामी देखाउने काम समेत गरियो । त्यसो गर्दा समेत आफ्नो समस्यामा कुनै कमी नआएपछि बोम्जन लकडाउनकै विचमा मेलम्ची अस्पतालमा उपचारको लागि गए । मेलम्चीमा रगत परिक्षण गर्दा शरीरमा रगतको मात्रा कमी भएको रिपोर्ट अस्पतालले दियो । त्यसको दुइ दिन पछि उनी थप उपचारको लागि काठमाण्डौ, महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचारको लागि गए ।
शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनमा दुवै मृगौलाले काम नगरेको थाहा पाएपछि उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भए । कल्पनै नगरेको रोग आफ्नो शरीरमा छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यसबाट मुक्ती पाउने आशमा उनी अहिले जोरपाटीस्थित आफ्नी दिदी शान्ती बोम्जनको कोठाको सिलिङ हेरेर बसेका छन् । “कमाइ गरेर परिवारको पालनपोषण गर्नुपर्ने उमेरमा आफु नै परिवारको बोझ बनेर बस्नुपरेको छ,” विरामी अर्जुनले भने —“अब आफ्नो उपचार खर्च कसरी पु¥याउने भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ ।”
उनको उपचारको लागि २० लाख भन्दा धेरै रकम खर्च हुने अस्पतालले बताएको छ । गत असारदेखि नियमीत उपचार गराइरहेका बोम्जनको रगत शुद्धिकरण(डाइलासिस)को लागि सरकारले निशुल्क व्यवस्था गरेको छ । डाइलासिस निशुल्क भएपनि अन्य औषधी तथा कोठा बसाइ र अन्य खर्च गरेर पाँच लाख भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । सामान्य आर्थिक हैसियत भएका बोम्जन परिवार त्यती धेरै खर्च कहाँबाट जुटाएर उपचार गर्ने होला भन्ने तनावमा छन् ।
उनको मृगौला शिक्षण अस्पतालमा नै प्रत्यारोपण हुनेछ । बोम्जनको लागि उनकै ५४ वर्षीय पिता वीरबहादुर बोम्जनले आफ्नो मृगौला दिदैछन् । सामान्य आर्थिक अवस्था भएका बोम्जन परिवारको लागि अहिले स्थानीयस्तरबाट केही सहयोग रकम समेतत संकलन भइरहेको छ । बोम्जनलाई आर्थीक सहयोग गर्न चाहनले मनकारी व्यक्तिले सहयोग संकलन सम्पर्क व्यक्ति राजन धिताल(९८५१०८५७८८) र उनकी दिदी शान्ती बोम्जन( ९८६२१७८७८४) सँग सम्पर्क गर्न वा अर्जुनका पिता वीरबहादुर बम्जनको नाममा रहेको कृषी विकास बैंकको खाता नं. ०२१३६००७९१२२००१८ वा मेगा बैंकको खाता नं. ११०००५०००३५५६ मा सिधै रकम जम्मा गरिदिन पनि सक्नेछन् ।
हाम्रो सानो सहयोगले कसैको जिवन बाँच्न सक्छ भने आफुले सकेको सहयोग गर्न सम्पर्क व्यक्ति राजन धितालले सबैलाई आग्रह गरेका छन् । धितालकै सक्रियतामा यो समाचार तयार पार्दासम्म करिब ४ लाख रुपैंया संकलन भएको र थप रकम आवश्यक भएको धितालले बताए । शल्यक्रिया सफल भइसकेपछि पनि दुबै बाबुछोरा नै अशक्त हुने हुँदा उनीहरुको थप उपचार र जिविकोपार्जनकोे लागि समेत सहयोग जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
Tags: arjun bomjanअर्जुन बाेम्जनखुल्लापाना
उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा बस्नेतसहित १८ निर्वाचित